FAQs - Myanmar Classifieds, Hotels in Myanmar, Resturants in Myanmar, Jobs in Myanmar
မေး။ ။ မြန်မာ လစ်စ် ဆိုတာ ဘာလဲ?
ဖြေ။ ။ မြန်မာလစ်စ် ML ဆိုသည်မှာ မြန်မာလူမူဆက်သွယ်ရေး အတွက် အင်တာနက် ကြော်ငြာဆိုဒ် တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဤဆိုဒ်တွင် ပစ္စည်းအရောင်းအဝယ်လုပ်ခြင်း လှယ်လည်ခြင်းများကို အင်တာနက်ပေါ်မှတဆင့် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့လိုအပ်သော အိမ်အရောင်းအဝယ်လုပ်ခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေခြင်း၊ အလုပ်သမားရှာဖွေခြင်း၊ ကားအရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ခြင်း၊ စားသောက်ဆိုင်ကြော်ငြာ၊ အခြားသော် စီးပွားရေးဆိုင်ရာကိစ္စများကို လူကြီးမင်းကိုယ်တိုင် ပို့စ်တင်ခြင်းဖြင့် ရောင်းသူဝယ်သူများကို ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။
မေး။ ။ မြန်မာလစ်စ် ML အဓိက ရည်ရွယ်က ဘာလဲ?
ဖြေ။ ။ လူကြီးမင်းတို့အတွက် ရောင်းရန် ဝယ်ရန် လှယ်လည်ရန် ကြော်ငြာရန်များကိစ္စအဝဝကို မြန်မာလူမှုဆက်သွယ်ရေး ကွန်ယက်အတွင်း အခွင့်အလန်း ပေးသော် ဆိုဒ် ပဲဖြစ်ပါတယ်။
မေး။ ။ မြန်မာလစ်စ် ML ကို ကြော်ငြာဖို့ ဘာကြောင့်သုံးသင့်သလဲ?
ဖြေ။ ။ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ အင်တာနက် အသုံးပြုသူများသည် မြန်မာတင်မက ကမ္ဘာအရပ်ရပ်တွင် တိုးပွားလာသည့်အလျှောက် မြန်မာလစ်စ် ML မှာ သင့်တင့်သော် ကြော်ငြာဆိုဒ် ဖြစ်လာပါသည်။ အခြားသော် ကြော်ငြာလုပ်ငန်းများနှင့် မတူညီသော် အချက်မှာ သင့်၏ကြော်ငြာများကို ၂၄ နာရီပတ်လုံး ကမ္ဘာအရပ်ရပ် မည်သည့်နေရာတွင် ရှိစေကာမူ ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ ML တာဝန်ယူနိုင်ခြင်းတစ်ချက်မှာ လူကြီးမင်း၏ကြော်ငြာကို ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ ထောင်နှင့်ချီသော် ကြည့်ရှုသူအရေအတွက်ပင် ဖြစ်ပါတယ်။ ML ၏ နောက်တစ်ချက်အနေဖြင့် သင်၏ ကုန်ပစ္စည်းများကို ကြည့်ရှုသူများအား အာရုံစိုက်စေရန် ကြော်ငြာအားတိုးမြင့်စေခြင်းဖြင့် ရောင်းအားဝယ်အားကို တိုးမြင့်စေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကို တခြားဆိုဒ်များထက် အခကြေးငွေ နည်းနိုင်သမျှနည်း၍ ကြည့်ရှုသူများကို ဒီထက်မက များပြားစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
မေး။ ။ ကြော်ငြာသူ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကြော်ငြာတွေမှာ ရုပ်ပုံထည့်သွင်းလို့ရနိုင်ပါသလား?
ဖြေ။ ။ ရနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန် ကြော်ငြာများအနေနဲ့ ၁၅ ပုံအထိ သင်လိုသလောက် ဆိုဒ်ကိုထည့်သွင်းလို့ရပါတယ်။
မေး။ ။ တကယ်လို့ ကျွန်တော်တို့မှာ ကြော်ငြာရန်အတွက် ထည့်သွင်းပုံများမရှိလျှင်ကော် ML ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသလား?
ဖြေ။ ။ ပေးပါတယ်။ ML မှ ဓါတ်ပုံအဖွဲ့မှနေ၍ သင်၏ စီးပွားရေးတည်နေရာသို့လာရောက်ကာ သင်စိတ်ကြိုက်အတိုင်း ရိုက်ယူပေးပါတယ်။
မေး။ ။ မြန်မာလစ်စ်ကို မြန်မာပြင်ပမှာရော လာရောက်ကြည့်ရှုလို့ရပါသလား?
ဖြေ။ ။ ရပါတယ်။ ဘယ်နေရာမှ မဆို အင်တာနက်ကွန်နယ်ရှင်ရှိသ၍ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
မေး။ ။ မြန်မာလိုမဖတ်တတ်သော် လူများကော လာရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသလား?
ဖြေ။ ။ ရပါတယ်။ ဘာသာစကား ကဏ္ဏမှနေ၍ သင်လိုရာဘာသာ စကားကိုရွေးနိုင်ပါတယ်။ ယခုလောလောဆယ်အတွင်း မြန်မာနှင့် အင်္ဂလိပ်နှစ်မျိုးကို ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ အခြားသော် ဘာသာများကို များမကြာမှီတွင် ထည့်သွင်းဖြည့်စွက်သွားပါမည်။
မေး။ ။ Featured Ads ကဏ္ဏက ဘာလဲ?
ဖြေ။ ။ Featured Ads ဝန်ဆောင်မှုမှာ သင်၏ ကြော်ငြာများကို Featured Ads ကဏ္ဏမှာ ထည့်သွင်းပေးပါတယ်။ ဤသို့ ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် မြန်မာလစ်စ်ကို ဖွင့်ဖွင့်ခြင်း သင်ရဲ့ ကြော်ငြာကို ပထမဆုံးမြင်နိုင်၊ ထိတွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မေး။ ။ ထည့်ပြီးကြော်ငြာများကို ဘယ်လောက်အချိန်ထိ တည်ရှိပါမည်လဲ?
ဖြေ။ ။ ပုံမှန်ကြော်ငြာများမှာ တစ်လအထိအခမဲ့ ကြော်ငြာနိုင်ပါသည်။ ၄လတစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် ၁ နှစ်တစ်ကြိမ် အစီအစဉ် ရွေးချယ်မှုများလည်းရှိပါတယ်။ ပြီးလျှင် ရောင်းထွက်မခြင်းတင် အစီအစဉ်ရွေးချယ်မှုလည်း ရှိပါသည်။
မေး။ ။ အသုံးပြုသူများသည် ကြော်ငြာများ အလွယ်တကူရှာနိုင်ပါသလား?
ဖြေ။ ။ မြန်မာလစ်စ် ML မှာ အသုံးပြုသူများလွယ်ကူစွာ သုံးနိုင်ရန်အတွက် ကဏ္ဏအလိုက်စီစဉ်ထားပါသည်။ ထိုသို့ စီစဉ်ထားခြင်းဖြင့် လိုအပ်ချက်များကို စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းရှာဖွေနိုင်ပါသည်။
မေး။ ။ အသုံးပြုသူများ ကျွန်ုပ်၏ ကြော်ငြာပေါ်စာမျက်နှာတွင် စာပြန်ကြားနိုင်ပါသလား?
ဖြေ။ ။ ပြန်လည်ဖြေကြားနိုင်ပါတယ်။ သင်၏ ကြော်ငြာပေါ်မှနေ၍ စာပြန်သော်ခလုတ်ကို လွယ်ကူစွာနိုပ်ခြင်းဖြင့် ပြန်ကြားနိုင်ပါတယ်။ ဤခလုတ်ကို နိုပ်ခြင်းဖြင့် မတ်ဆိတ်စာမျက်နှာတခုတတ်လာပြီးလျှင် ထိုစာမျက်နှာပေါ်တွင် စာဖြည့်လိုက်ရုံဖြင့် သင် အီးမေးလ်သို့ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
မေး။ ။ ကျွန်ုပ်တွင် အီးမေးလ် အကောင့်မရှိခဲ့လျှင် အသုံးပြုသူမတ်ဆိတ်များကို ရနိုင်ပါသလား?
ဖြေ။ ။ ရနိုင်ပါတယ်။ ML မှ သင့်ထံတွင် အီးမေးလ်မရှိလျှင် အခမဲ့ အကောင့်ဖွင့်ပေးပါတယ်။
မေး။ ။ ကျွန်တော်တို့ ကြော်ငြာများကို ဒီဆိုဒ်မှာ ဘယ်လိုတင်မလဲ?
ဖြေ။ ။ မြန်မာလစ်စ် ML ရုံးသို့သော်၎င်း ဖုန်းဖြင့်သော်၎င်း အီးမေးလ်ဖြင့်သော်၎င်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ ML အဖွဲ့မှ သင် စီးပွားရေးရှိရာသို့ လာရောက်နိုင်ပါသည်၊ သို့သော် အပိုပေး ဝန်ဆောင်မှု အနည်းရှိပါမည်။
မေး။ ။ မိမိဘာသာ ကြော်ငြာများကို တင်လို့ရနိုင်ပါသလား?
ဖြေ။ ။ သင့် ကြော်ငြာကို မိမိဘာသာတင်နိုင်ပါသည်။ ကြော်ငြာတင်ပြီးချိန်မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့ ML မှ စစ်ဆေးပါမည်၊ မှန်မမှန် နောက်ဆုံးစစ်ဆေးပြီးမှသာ ကြော်ငြာကိုတင်ပေးပါမည်။ အကယ်၍ သင်ကြော်ငြာမှာ ကျွန်ုပ်တို့ ML စည်းမျဉ်းနှင့်မကိုက်ညီပါက ဖျက်ပြစ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
မေး။ ။ ဘယ်လိုပို့စ်တွေကို မြန်မာလစ်စ်တွင် ခွင့်မပြုပါသလဲ?
ဖြေ။ ။ မြန်မာလစ်စ်မှ အောက်ပါအချက်များကို ပို့စ်လုပ်ခြင်းမှ ကန့်ကွက်ထားပါသည်။
၁) နိုင်ငံရေး ပို့စ်လုပ်ခြင်း
၂) တရားမဝင်သော၊ တပါးသူအား ထိခိုက်စေသော၊ တပါးသူအား ခြိမ်းခြောက်စေသော၊ ရိုင်းစိုင်းစေသော၊ နှောက်ယှက်စေသော၊ အရှက်ရစေသော၊ အသရေဖျက်စေသော၊ ပြန့်ပွားနှောက်ယှက်စေသော စကားလုံးများထည့်သွင်းခြင်း
၃) တပါးဘာသာ၊ လူမျိုးခြား၊ ကျားမ၊ အသက်အရွယ်၊ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်သော် သူများအား အောက်တန်းကျအောင်ပြုလုပ်ခြင်း အရှက်ရစေခြင်း မုန်းတီးအောင်ပြုစေခြင်း
မေး။ ။ မြန်မာလစ်စ်မှ ကြော်ငြာအပြင် တခြားဘယ်အရာများ ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသလဲ?
ဖြေ။ ။ မြန်မာလစ်စ်မှ အောက်ပါ ဝန်ဆောင်မှုများပေးပါသည်။
၁) ဝက်ဆိုဒ် တင်ပေးခြင်း
ကမ္ဘာရှေ့ပြေး Web Hosting ကုမ္ပဏီ နှင့် တွဲဖက်လုပ်ကိုင်သော် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလစ်စ် မှာ ဝက်ဆိုဒ် တင်ပေးခြင်း (Web Hosting) ကို လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနဲ့ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းများအတွက် ဈေးနှုမ်းချိုသာမှု ဝန်ဆောင်မှု များပေးနေပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာများနဲ့ အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကာစတန်မာများ စိတ်ကြိုက်ဖြစ်စေရန် အာမခံပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဝက်ဆိုဒ်တင်ပေးခြင်း (Web Hosting) ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ ဈေးနှုံးကို သိချင်ရင်တော့ www.myanmarlisthosting.com သွားရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
၂) ဝက်ဆိုဒ် ဒီဆိုင်းများ
မြန်မာလစ်စ် ML မှ ဝက်ဆိုဒ် ဒီဆိုင်းကို လူကြီးမင်းတို့ စိတ်တိုင်းကျသည် အထိတာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
၃) ဒိုမိန်း စာရင်းသွင်းပေးခြင်းများ
မြန်မာလစ်စ်တွင် ဒိုမိန်း စာရင်းသွင်းခြင်း (Domain Registration) အတွက် မျိုးစုံလှသော TLD များ (*.com, *.net, *.org, *.edu, etc) မှ လိုအပ်သလို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ ဈေးနှုံးကို သိချင်ရင်တော့ www.myanmarlisthosting.com သွားရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
wedding dress forever
tsin pog ..